Magnetic inokanganisa & kupukuta muchina Mugadziri uye Anotengesa
musha / Magnetic Grinding Machine / Magnetic deburring & polishing muchina
Category: Magnetic Grinding Machine Tags: muchina unoputika wekupukuta, magineti inokanganisa mashini, maginiti anotyisa kupukuta, magidhi ekugaya zvekushandisa, magnetic grinding machine, muchina wokupukuta
Magnetic deburring & kupukuta muchina Musimboti
Magnetic kukuya michina (rinobva deburring & makorari muchina) shandisa simba remashiripiti remagnetic field kuitira kuti simbi dzisina kushandiswa dzigadziriswe pakarepo, uye mapeji de-burr, kupurisa uye kuchenesa zvidimbu zvebasa zvakanyatsobudirira uye zvakajeka. Iyi mishonga haigadziri kukuvadza kune zvakatipoteredza kana iri kushanda.
Magnetic Grinding Machine (magnetic deburring & polishing muchina) Magadzirirwo
The magnetic Grinding Machine (magnetic deburring & makorari) is SUPER yakakura kukura mugomba yakagadzirwa, yakakodzera kuwandakugaya, kuputika kana kuchenesa. The magnetic grinding machine iri kumhanya zvisiri nyore, mumwe munhu anogona kushandisa michina yakawanda.
Magnetic kukuya michina (rinobva deburring & makorari muchina) shandisa simba remashiripiti remaginetic field kuitira kuti simbi isina zvimbi isina kushanduka ichinje nokukurumidza, kubvisa-burr, kupurisa uye kuchenesa zvidimbu zvebasa zvakanyatsobudirira uye zvakajeka.
The rinobva kukuya michina (rinobva deburring & makorari muchina) kune ushamwari hwezvakatipoteredza, HAPPU kusvibiswa. Vari kugayauye kuputika nekukurumidza, kubudirira. Vane unyanzvi hwakanaka hwekurumidza kubuda-burring, yakakwirira kwazvo kugaya zviduku zviduku zvemukati, mukati memapapiro, zvipfeko, nezvimwe. Ita uIYE kusakanganiswa kwepamusoro pebasa, uye usati waita kuti kuve kwakakwana kwebasa.
Magnetic grinding machines zviri nyore, dzakachengeteka uye zviri nyore kushanda, mari shoma uye hupenyu hwakareba hushanda.
Zvigadzirwa zvedu zve kugadzira mishonga zvakakodzera kugaya, de-burring, kusungurudza nekuputira marudzi ose ematare ekuputira zvikamu, kusungirirwa kwesimbi, ipurasitiki yakasimba, nezvimwewo kugadzira mishonga anoiswa mukati maindasitiri ehorologe, girazi remaziso, kugadzirwa kwekiyi, zvishongo & zvishongo, elektroni, artware, michina uye Hardware, nezvimwe.
Zvishongo, zvishongo zvemaoko, muunganidzwa, otomatiki lathe zvikamu, kufa-kukanda, kubaya muchina zvikamu, chitubu uye shrapnel zvipenga zvikamu, zvemagetsi, telecommunication, zvekurapa zvikamu.
1.Inokodzera mwenje simbi simbi, isiri-simbi simbi uye yakaoma plactic yakakosha zvikamu.
2.Realizing multi-effec akadai burr wlimination, shure pakona,kuputika uye kuchenesa, zvichingodaro
3.makorari akafa kona yezvisina kukwana zvikamu, tubular,
4.blending nguva, kumhanya, nyore uye yakachengeteka mashandiro
5.Adjustable anogona kusangana zvose makorari zvirevo
6.No akafa angled apo makorari
7.Kupedzisa kuyeuchidza, kunogona kukuyeuchidza kana kupora kwaitwa, munhu anogona kudzora akati wandei
8.Volage, ikozvino, nguva uye nguva inodzora nyore nyore
9.makorari processure inoda hapana manwork kupindira
Magnetic Grinding Machine (yemagetsi inotsvedza & yekupukuta muchina) rinobvisa rakatsvuka kana kupisa nzvimbo dzezvikamu, kubvisa uye kupedzisa zvikamu munguva pfupi chaizvo. Mushonga wacho unonyanya kushandiswa kune zvikamu nezvikamu zvemukati, maumbirwo akaoma, zvipfeko kana zvisikwa. Magnetic polishing machine haigoni kukuvadza pamusoro pezvikamu, uye haisi kuchinja kwakarurama kwezvikamu kana apedza. Mushini unoshanda zvinobudirira uye ndeye 5 ~ 20 maminitsi inodiwa kune zvikamu. Magnetic Grinding Machine (yemagetsi inotsvedza & yekupukuta muchina) anokwanisa kupedza zvikamu zvesimbi nezvinhu zvakaoma mapurasitiki.